Counselling Corner Myanmar - လူတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန် အောင်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ?
လူတွေရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန် အောင်ထောက်ပံ့နိုင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ဘာတွေလုပ်နေသလဲ?
Posted on စက်တင်ဘာ 21, 2021 စက်တင်ဘာ 21, 2021 | မှတ်ချက်များ မရှိပါ။
Counselling Corner က နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး အခြေအနေတွေ တိုးတက်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ ကူညီမှုပေးနေတဲ့ အဖွဲ့လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ကျွန်တော်တို့ဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာ၊ ကြံ့ခိုင်မှုကို အလေးထားလိုသူများ၊ စိတ်ကျန်းမာဖို့ရန် လိုအပ်နေ သူများ အတွက် ထောက်ပံ့ရန် များပြားလွန်းတဲ့၊ မတူကွဲပြား တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ သင်တန်းတွေ ပေးနေတဲ့အပြင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အပတ်စဉ် အခမဲ့ ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒီသတင်း လွှာမှ ကျွန်တော်တို့ ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘယ်လိုအကူညီထောက်ပံ့ပေး နေသလဲဆိုတာကို အနည်းငယ် ရှင်းပြပေး သွားမှာ ဖြစ်လို့ဖတ်ရှုပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ အသေးစိတ် ပိုမိုသိလိုပါက သတင်းအောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အခြား messenger (သို့) email သို့ စာပို့၊ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဒဏ်ရာရှိသော အတွင်းသူငယ်၏ လက္ခဏာများ
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လူမှုကွန်ယက်တွေဖြစ်တဲ့ Youtube, Facebook, Telegram ကနေပြီးတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ လစဉ်လတိုင်း ဆွေးနွေးမှုတွေ၊ သင်တန်းတွေပေးနေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒီလအနေနဲ့ အတွင်းသူငယ်စိတ် (Inner Child) ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Inner Child ဆိုတာ ယခင်အတိတ်ငယ်စဉ်ဘဝက ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံကိုဆိုလိုတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးဘဝမှာ အနုတ်သဘော ဆောင်ဆိုးလွန်းတဲ့ အတွေ့ကြုံတွေခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေဟာ ကြီးလာတဲ့အချိန်ထိ ဒီအမူအကျင့်တွေက သင့်ကိုထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီစိတ်အတွင်းဒဏ်ရာတွေအကြောင်းကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုမှု မပြုပါက အဲဒီအဖြစ်အပျက်၊ ဒဏ်ရာတွေ ကို သင်ဆက်လက်သယ်ဆောင်သွားအုံးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုခြင်းက စိတ်အတွင်း ဒဏ်ရာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအား ဖြင့် လျစ်လျူရှုခြင်းအမျိုးအစား (၃) မျိုးလောက်ရှိပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ လျစ်လျူရှခြင်း (ဥပမာ- ငယ်စဉ်ကတည်းက လုံလောက်တဲ့ အာရုံစိုက်မှု၊ အသိမှတ်ပြုမှု မခံခဲ့ရဘူး၊ သူတို့တွေရဲ့ စိတ်ခံစားမှုကို ပြသတဲ့အခါ အပြစ်တင်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်… စသဖြင့်)
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျစ်လျူရှုခြင်း (အနိုင်ကျင့်ခံရတယ်၊ ကလေးတစ်ယောက်လိုမျိုးနားထောင်ခြင်းမရှိဘူး၊ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေမရှိဘူး စတဲ့အမူအကျင့်တွေရဲ့ရလဒ်ဟာ သူတစ်ပါးအပေါ်လေးစားမှုမရှိဘူး ဆိုတာကို ပြသသလို၊ လွန်ကဲတဲ့ဒေါသထွက်မှုတွေ၊ စိတ်စွဲလမ်းမှုတွေကိုလဲဖြစ်စေနိုင်တယ်)
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လျစ်လျူရှုခြင်း (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရမှု) ထိုသို့လျစ်လျူရှုမှု ခံစားခဲ့ရ ပါကအစာစားပုံမမှန်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ထိခိုက်စေခြင်း၊ အကြမ်းဖက်သော အမူအကျင့် နှင့် လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းမှုတို့ကို ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အတွင်းသူငယ် ဒဏ်ရာရှိသူဟာဆိုရင် သင့်ချစ်သူ၊ ခင်သူ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းသင်း၊ မိသားစုများအပေါ် (သို့မဟုတ်) လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် သင်၏ဆက်ဆံရေးကို ပြင်းထန်စွာ ထိခိုက်နိုင်ပြီး အောက်ဖော်ပြပါလက္ခဏာများ ကိုလည်း ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
သင် မသင့်တော်တဲ့အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်/ မလုပ်သင့်တဲ့အပြစ်လုပ်မိတယ်လို့ခံစားရတယ်
သင် ယုံကြည်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြဿနာရှိတယ်
သင် နယ်နိမိတ်ထားဖို့၊ ကန့်သတ်ချက်တွေထားဖို့ ကြောက်ရွံ့တယ်
သင် တစ်ခုခုဆို လျင်မြန်စွာဒေါသထွက်လွယ်တယ်
သင် တစ်ခုခုကို စွန့်လွတ်ဖို့ခက်ခဲတယ်
သင့်ရဲ့အတွင်းသူငယ်စိတ်ကလေးကို ကုစားဖို့ဆိုရင် ပထမဆုံးအဆင့်မှာသူရှိနေကြောင်းနဲ့ သူဒဏ်ရာရှိနေတယ် ဆိုတာ ကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ အတွင်းသူငယ်ကြောင်းကို ပိုသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က video link လေးမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ https://www.youtube.com/watch?v=ik6tjMIE2mk&t=6s
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နှင့် စနေနေ့တွေမှာ အခမဲ့ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ဆွေးနွေးမှု (Free workshops on Wednesday and Saturday)
March လလောက်တည်းကနေစပြီး အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နှင့် စနေနေ့ တိုင်းမှာ အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် စိတ်ခံစားမှု များကို ဖော်ပြရန်လိုအပ်နေသူတိုင်း အတွက် ဖော်ပြခွင့်ရအောင် ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner ကနေပြီးတော့ ဆွေးနွေးပွဲ (Free Emotional Workshop) လေးတွေ လုပ်ပေးနေခဲ့ပါတ​ယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ဆိုရင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြတဲ့အပြင် ပါဝင်သူတိုင်းကို သူတို့ရဲ့ခံစားချက်များကိုပြောပြရန် နှင့် နားထောင်ရန် အခွင့်အရေးများ ကိုလဲ ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်သူတွေဟာဆိုရင် သူတို့ရဲ့ခံစားချက် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒီလိုဖြစ်နေတာဟာသူတို့ တစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါလား၊ သူတို့ခံစားချက်တွေကို နားထောင်ပေးမယ့်သူတွေဟာအရေးကြီးတယ်၊ ၎င်းဟာ သူတို့ကို စိတ်သက်သာရာရစေတယ် ဆိုတာကို သဘောပေါက်နားလည်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကမှ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဆွေးနွေးမှုသဘောတရားကို ပုံမှန်ထက် အနည်းငယ် ထပ်မံတိုးမြှင့်လိုက် ပါတယ်…
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ဆိုရင် – အင်္ဂါနေ့က Facebook Live program မှာ ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်ပြီး မတူညီတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတွေနဲ့ဆွေးနွေးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အင်္ဂါနေ့က ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Facebook Live ကိုမကြည့် လိုက်ရသူများ (သို့) Live မှာ နားမလည်မှုတွေများရှိခဲ့ရင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ မှာပါဝင်တက်ရောက်ပြီး ထပ်မံမေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်မှာဖြစ်သလို ပါဝင်သူများရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလဲ မျှဝေ နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စနေနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ – ပုံမှန်လုပ်နေကြ ဆွေးနွေးမှုအတိုင်း ဆက်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်သိထားပြီးဖြစ် တဲ့အတိုင်း ဆွေးနွေးပွဲမှာ ပါဝင်သူ၊ လူတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို လုံခြုံတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖော်ပြနိုင်မှာ ဖြစ်သလို၊ ဝေဖန်မှုလဲပြုမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အနည်းငယ်ထူးခြားတာလေးကတော့ အပတ်စဉ် တိုင်းမှာ သတ်မှတ် ထားတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကို သူတို့ရဲ့ခံစားချက်များ ဖော်ထုတ် မျှဝေဖို့ရန် အဓိကထား ရည်ရွယ်လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ မိခင်တွေ၊ မိဘတွေ၊ ကျောင်းသားတွေ၊ အသက်ကြီး/ငယ်တဲ့သူတွေ၊ မသန်စွမ်းသူတွေ၊ ချစ်သူ၊ မိသားစုတွေနဲ့ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေ တဲ့သူတွေ နဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေ စတဲ့ အဖွဲ့လေးတွေလိုမျိုး အခြားသော အဖွဲ့အစည်းများကို အားပေးတဲ့အစီစဉ် လေးပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံမှာလဲ လုပ်နေကြ အတိုင်း လူတိုင်းအတွက်ကိုလဲ ရည်ရွယ် လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍သင့်မှာ ကိုယ်သိတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းလေးတွေ ရှိရင်၊ သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ကို ဆက်သွယ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။
ဘယ်လိုတက်ရောက်ရမလဲ? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page လေးမှာ ဆွေးနွေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတင်းတွေကို အပတ်စဉ်တိုင်းမှာကြော်ငြာ သွားပေးမှာပါ (အကယ်၍ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page လေးကို like and follow မလုပ်ရသေးပါက လုပ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ)၊ သင် တက်ရောက်လို တဲ့ နေ့ကိုကြည့်ပြီး Register link လေးကိုနှိပ်၊ အမည်၊ email တွေဖြည့်ပြီး၊ စားရင်းပေးသွင်း နိုင်ပါ တယ်။ ပြီးတာနဲ့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ email လိပ်စာလေးထဲကို zoom link လေးပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ပါဝင်ဆွေးနွေးလိုချင်သူများ အတွက် အင်တာနက်၊ ဖုန်းနဲ့ ဆိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာသာရှိမယ်ဆိုရင် သင်အဆင်ပြေတဲ့နေရာကနေ တက်ရောက်နိုင်တာ ဖြစ်လို့ တက်ရောက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ အကယ်၍ သင့်ဆီမှာ သိချင်၊ မေးချင်တာလေးတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook messenger (သို့) ဖုန်းခေါ်ပြီး ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ ဒီဆွေးနွေးပွဲကို Free လုပ်ပေးတာလဲ? ဘာကြောင့်လဲဆို‌တော့ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုကို ပိုမိုကြံ့ခိုင်စေချင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတိုင်းအတွက် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အစီအစဉ်များအား အခကြေးငွေကောက်ခံ၍ဖြစ်စေ၊ အခကြေးငွေမဲ့ ဖြစ်စေ ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိပါတယ်ဗျာ။
သင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက အဓိကသော့ချက်ပါပဲ
အထူးသဖြင့် ခုလို (နိုင်ငံရေး နဲ့ covid ရောဂါတွေ) ကြောင့်မတည်ငြိမ်ဖြစ်နေပြီး စိန်ခေါ်မှုတွေသိပ်များတဲ့ကာလမှာ လူတွေအများအပြား စိုးရိမ်စိတ်တွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ၊ ပူဆွေးသောကရောက်မှု၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ဆုံးရှုံးမှု၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့မှု တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ ရင်ဆိုင်နေ ကြရမှာမလွဲပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီလိုအခြေအနေမှာ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေက ကိုယ့်ဝန်ထမ်း တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာဖို့ ထောက်ပံ့၊ ကူညီမှုပြုရန် ပြသဖို့အချိန်ကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ NGO တွေ၊ ကုမ္ပဏီ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေ တော်တော်များများက သူတို့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုဘယ်လို ထောက်ပံ့မှုမျိုးပေးရမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ကိုမေးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner ကနေပြီးတော့ စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ တွေ၊ တစ်ဦးချင်း နှစ်သိမ့်ဆွေးမှုတွေ၊ မတူကွဲပြားတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောပွဲတွေ ပြုလုပ်ပေးတဲ့အပြင်၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်စေတဲ့ ရှေးဦးသူနာပြုစုမှု (First Aid mental health support) သင်တန်းတွေ၊ အခြေခံ Counselling နဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေကိုလဲဖွင့်လှစ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုသည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ သဘောတရားများကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး မြန်မာဘာသာဖြင့် တိုင်ပင်၊ နှစ်သိမ့်၊ ဆွေးနွေးမှု ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထောက်ပံ့ပေးခြင်းက အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သောကြောင့် ယခုလို လိုအပ် နေချိန်မှာ ထောက်ပံ့ပေးခြင်းဖြင့် သူတို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်စွမ်းဆောင်ရည်တွေမြင့်မားလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ရဲ့ လူနေမှုဘဝ အတွက် အလွန်အထောက်အကူဖြစ်မှာ အမှန်ပါပဲ။
သင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email (info@counsellingcorner.com) ကိုစာပို့ဆက်သွယ်နိုင်သလို ဖုန်း – 09-664 017 251, 09-784 509 916 သို့ခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။
Counselling Corner ကနေပြီးတော့ လစဉ်လတိုင်း လူအယောက် (400) အထက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့ တွေ ပေးလျက်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပြင်၊ အခြားသောသူများရဲ့ စိတ် ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကို ပါပိုမိုတိုးတက်စေဖို့ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက်ကနေပြီးတော့ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီ ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ လူတွေကို ဟိုလိုလုပ်ပါ၊ ဒီလိုလုပ်ပါမပြောပဲ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းနဲ့ ဘယ်လို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမလဲ၊ ခံစားချက်တွေကို ထုတ်ဖော်တတ်အောင်ဘယ်လိုအားပေးရမလဲ၊ သူတို့ရဲ့ခံစားချက် ကဘာတွေလဲ ဆိုတာကို သူတို့ကိုယ်သူတို့နားလည်အောင်၊ အဖြေရှာတတ်အောင်၊ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စတဲ့ အပြု သဘောဆောင် ကောင်းမွန်တဲ့ရလဒ်တွေရရှိ စေဖို့အတွက် နည်းလမ်း‌ေတွပေး၊ ပြောဆိုအားပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဆွေးနွေးပွဲကို ပြုလုပ်ပေး ခြင်းအားဖြင့် တစ်ချို့သောသူတွေက ပိုမိုကောင်းသွားတာရှိပေမယ့် တစ်ချို့သောသူတွေက တစ်ဦးချင်း နှစ်သိမ့်၊ ဆွေးနွေးမှုပြုဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတာ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Counselling Corner ကနေ လူတွေအတွက် တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ အတတ်နိုင်ဆုံး အထောက်အပံ့ပေးနေတာ တစ်လကို လူအယောက် (၄၀၀) ကျော် လောက်ထောက်ပံ့ပေး ဖြစ်ခဲ့လို့အလွန်ပဲဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျာ။
ဝေးလံ ခေါင်းပါး တဲ့နေရာ၊ ရပ်ရွာ၊ ဒေသတွေမှာ နေတဲ့ တစ်ချို့သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလဲ ဆွေးနွေးပွဲတွေ (Workshops) နှင့် Counselling သင်တန်းတွေပေးခဲ့တဲ့အပြင်၊ Counsellor တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအတွက်ကိုလဲ ထပ်မံ လေ့ကျင့်သင်ကြား၊ ကြီးကြပ်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဒါမှ သူတို့ရဲ့ ရပ်ရွာဒေသအတွင်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက် ပြီးအထောက်အပံ့တွေပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ NGOs တွေအပြင် အခြားနယ်တွေဖြစ်တဲ့ ကချင်၊ ကယားတို့လို နေရာမျိုးတွေကိုလဲ သင်တန်းတွေပေး နေပါတယ်။ သင်တန်းအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိလိုပါက ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေ ဆွေးနွေးပြောပြဖို့အသင့်ပါဗျာ။
YouTube Channel ကိုအတူတူကြည့်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြောင်းကိုဆွေးနွေး ကြရအောင်
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီး များပြားလှတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး YouTube မှာအသစ် တွေ တင်ပေးတာဖြစ်လို့ သင်ရဲ့ မိသားစုဝင်တွေ၊ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Link လေးကို Subscribe လုပ်ထားဖို့ ပြောဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။
အပတ်စဉ် မြန်မာဘာသာဖြင့် Video လေးကိုတင်ပေးတာဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို အားပေးဖို့ နဲ့ အခြားသူတွေကိုမျှဝေဖို့ ပြောချင်ပါတယ်ဗျာ။ Video အများစုဟာ အချိန် (၅) မိနစ်လောက်သာကြာမှာဖြစ်လို့ အားလပ်တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာ ဖွင့်ပြီး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းတွေကို ဆွေးနွေးဖို့ အလွန်သင့်တော်ပါတယ်ဗျာ။
Share / Like လုပ်ခြင်းအားဖြင့် အားပေးနိုင်သလို ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အထက်ပါအကြောင်းအရာများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်သိလိုသည်၊ အကြံပေးလိုသည်များရှိပါက စုံစမ်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူတွေပြောရတာပိုမိုလွယ်ကူစေချင်သည့်အပြင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ အားလုံးကိုလဲ မိမိတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း စိတ်ကျန်းမာရေး အကြောင်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်ဖို့၊ ပိုမို တိုးတက်လာစေဖို့အတွက် သင်တို့ရဲ့အကူအညီများလိုအပ်ပါတယ်ဗျာ။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး နှင့်ပတ်သက်လို့ အသေးစိတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက အောက်ပါ လိပ်စာ၊ နေရာ၊ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
Phone: 09 664 017 251, 09 784 509 916
Facebook Page: Counselling Corner Facebook
Website: Counselling Corner
ရုံးလိပ်စာ – အမှတ် ၅/၉၊ ပထမထပ်၊ ဘိုကလေးဈေးလမ်း (အောက်ဘလောက်)၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
← ဝမ်းနည်း ပူဆွေးသောကဖြစ်ခြင်း
Counselling Corner Newsletter (November 2021) →